काठमाडौं उपत्यकाभन्दा ‘लुम्बिनी बढी प्रदूषित’ | Seto Khabar
हुम्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा थप
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन: लुम्बिनीमा २ जनाको उम्मेदवारी
फाइजर खोप अब ‘लामो समय फ्रिजमा भण्डारण गर्न सकिन्छ’
कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु दिनकै उचो, थप १९६* जनाको मृत्यु, ६ हजार ८९१ जनाले गरे स्वास्थ्य लाभ
सांसद बस्नेद्वारा नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
कोरोनाका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित
छाङ्गरुदेखि कालापानी जाने बाटो निर्माण गरिँदै
उँभाे-उँभाे लेक चढ्दै शेयरबजार, नेप्से परिसूचक र काराेबार हालसम्मकै उच्च
सडकमै भोजभतेर : निषेधाज्ञा उल्लङ्घन बढ्दै
गाउँभरी ज्वरोका बिरामी, परीक्षण गरेका अधिकांशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण
नगर अस्पताल कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण
एचडियु सेवा सञ्चालन भएपछि बिरामीलाई सहज
कोरोनाबाट वडामा एकै समुदायका ९ जनाको मृत्यु
काठमाडौं उपत्यकाभन्दा ‘लुम्बिनी बढी प्रदूषित’
२०७५ जेष्ठ ७, सोमबार (२ साल अघि)
ललितपुर, जेठ ७ । काठमाडौं उपत्यकामाभन्दा लुम्बिनीमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढी पाइएको छ । वातावरण विभागले वायुको अवस्था मापन गर्ने स्टेसनको एक वर्षको तथ्यांक हेर्दा लुम्बिनीमा प्रदूषणको मात्रा बढी पाइएको हो । उद्योगले निकाल्ने धुवाँ र धुलोका कारण लुम्बिनीमा प्रदूषण बढी पाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक सफला श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा सात, पोखरामा तीन, सौराहा, लुम्बिनी र धुलिखेलमा एउटा/एउटा स्टेसन छन् । गत वर्ष जडान भएका ती यन्त्रको एक वर्षको नतिजा हेर्दा सबैभन्दा लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण बढी पाइएको हो । उनी भन्छिन्–‘त्यस क्षेत्रमा भएका उद्योग नै प्रदूषण गराउने प्रमुख कारक भएको पाइएको छ ।’
सीमानजिकका ठाउँमा छिमेकी मुलुकबाटसमेत धुलो–धुवाँ आउने सम्भावना हुन्छ । तर, कति यहाँको धुलो र कति उताबाट आउँछ भन्ने अहिलेसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन । उनी भन्छिन्–‘कुन–कुन उद्योगले कति र कस्ता फोहर निकाल्छन् ? भन्ने विस्तृत् अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ नेपालभित्रै भएका उद्योगकोसमेत कहाँ–कहाँ कस्ता उद्योग छन् र तिनले कस्ता प्रदूषण गराएका छन् ? भन्ने एकीकृत तथ्यांक छैन ।
सौराहा, पोखरा र धुलिखेलभन्दा काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा बढी छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने गर्मी महिनामाभन्दा जाडो महिनामा वायु बढी प्रदूषित पाइएको छ । विभागले यो आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा स्टेसन राख्ने योजना गरेको छ । रासस
कतार र ग्वान्जाउमा हवाई उडान खुला गर्ने सरकारको निर्णय